Tag: kushambadzira 2008 | Martech Zone
Tag: kushambadzira 2008
Iri raive gore rinonakidza muinternet tekinoroji. Kana iwe ukazvitarisa kubva kune zviuru gumi zvetsoka maonero, vanhu vachiri kunyatso kupisa nzira yekuti ungashandise sei ichi chitsva svikiro, iyo Internet. Zvichida zviri pachena asi ini ndinotenda gore ra10,000 igore chairo rekushandisa nemazano zvinoenda Micro. Iko kushanduka kwesocial webhu (Webhu 2008) parizvino iri kufamba nekukurumidza ichienda kunharaunda nyowani yakanangwa. Iyo hombe, imwe-inokodzera-mhinduro yese ichave ichichinja